I-Industrial Products Mold
Iworkshop & Equipment
Sawubona, woza uzobona imikhiqizo yethu!
Okudinga ukunakwa ekukhiqizeni isikhunta
Njengoba sixhumana nezimboni ezengeziwe zokukhiqiza isikhunta, uyazi ukuthi yiziphi izinyathelo zokuklama isikhunta sepulasitiki? Yimaphi amakhono adingekayo abaklami besikhunta embonini yesikhunta okudingeka bawazi kahle? Nakuba lena kungeyona into esikhathazeke ngayo kakhulu, idinga ukuqondwa....
Kwenzeka kanjani ukuthi "i-burr" yesikhunta somjovo?
Imikhiqizo yokubumba umjovo ibhekisela kumapulasitiki ashiswe, afakwe ipulasitiki futhi ancibilikiswe umshini wokubumba umjovo, bese ejova emgodini wesikhunta sokubumba ukuze abunjwe. Ngemuva kokupholisa phansi, ukuncibilika kuyaqina futhi kuncishiswe, futhi umshini wokubumba umjovo uyabunjwa. Fl...
Ukuhlaziywa kwezinkinga nezimbangela zesikhunta somjovo!
Ukuguquguquka, ukugoba kanye nokusonteka kwemikhiqizo ekhubazekile kubangelwa ikakhulukazi ukuthi izinga lokushwabana endaweni yokugeleza likhulu kunalelo eliqonde mpo ngesikhathi sokubunjwa kwepulasitiki, okubangela ukuthi izingxenye zisonteke ngenxa yamazinga ahlukene okushwabana ohlangothini ngalunye. . Kuyi...
Kungani isikhunta esinobumo bomkhiqizo obuyinkimbinkimbi sidinga iziteshi zokupholisa ezivumelanayo?
Siyazi ukuthi ukuze uthole imikhiqizo ebunjiwe yomjovo efanelekile, okungenani amaphuzu amabili kufanele agcinwe engqondweni: ngesikhathi sokubunjwa komjovo, isivinini sokugeleza kokuncibilika emgodini siyafana ngangokunokwenzeka, futhi izinga lokushisa lodonga lomgodi isikhunta siyafana ngangokunokwenzeka. Uma iqembu...
Izincomo zokulondolozwa nokugcinwa kwesikhunta somjovo
Ukuqhubeka esihlokweni sokugcina, ngizoqhubeka nokukhuluma ngenye ingxenye yezincomo zokugcinwa nokugcinwa kwesikhunta somjovo. 1. Lapho ukuhlinzwa kuhamba futhi kudinga ukuvalwa kwesikhashana, isikhunta kufanele sivalwe ukuze kuvinjwe umgodi nomgogodla ukuba ungavezwa ukuvimbela...
Isikhunta sepulasitiki se-dustbin sinezidingo eziphezulu kakhulu. Ngokuvamile, izinto ze-PP zokuvikela imvelo zisetshenziswa kakhulu, ezingakhiqiza indawo ekhanyayo bese zenza ukuphrinta kwefilimu nokunye ukwelashwa, okuba umgqomo kadoti ophezulu. Kepha ukwenza i-dustbin enhle, okokuqala, ikhwalithi ye ...
Siyini isakhiwo se-mol yepulasitiki
Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, ukuthuthukiswa kwesikhunta sepulasitiki kuyashesha kakhulu ezindaweni eziningi. Izibunjwa zepulasitiki zingamathuluzi ahambisana nemishini yokubumba yepulasitiki embonini yokucubungula ipulasitiki ukunikeza imikhiqizo yepulasitiki ukucushwa okuphelele kanye nobukhulu obunembile. Ngenxa ye...
Ukusetshenziswa okufanele kwesikhunta somjovo
Indlela yokusebenzisa isikhunta sokujova ngendlela efanele? U-Aojie uzokuphendulela! 1.Ukuvula nokuvala isivinini sesikhunta kanye nokulungiswa kokuvikela i-voltage ephansi Uma isikhunta sokujova sivulwa noma sivalwa, umthetho wokushintsha isivinini “unesivinini esisheshayo-esihamba kancane” amazinga wejubane angu-3. Enqubweni yokuvala isikhunta, ukuze...
Ukuhlukaniswa kwesikhunta sokujova
Yiziphi izinhlobo zokubunjwa komjovo ezingahlukaniswa zibe? Izigaba zesikhunta ezivamile zingahlukaniswa zibe izigaba ezilandelayo: 1.Isikhunta esisodwa sokuhlukaniswa komjovo wendawo Uma isikhunta sivulwa, isikhunta esigudlukayo kanye nesikhunta esingaguquki siyahlukaniswa, futhi ingxenye yepulasitiki iyakhishwa, ebizwa ngokuthi ...
Ikhwalithi yesikhunta Eminyakeni eyi-11 edlule, i-Aojie Mold isibe enye yezinkampani ezinkulu zesikhunta e-China. Phakathi neminyaka yokuqala eyi-10 kuya kweyi-15 yokuthuthukiswa kwemboni yesikhunta yaseShayina, lezo zinkampani ezazigxile eqophelweni lesikhunta kanye nokuphathwa kwekhwalithi zazuza intuthuko ngokushesha. I-Aojie Mold ...
Ubuchwepheshe Obusha Besikhunta Sepulasitiki
Kukhona isimiso esiyisisekelo ekukhetheni insimbi yesikhunta. 30%, futhi ingxenye ekungenisweni nasekuthunyelweni kwesikhunta iphezulu kakhulu njenge-50 ~ 70%. Yemikhiqizo yepulasitiki Isetshenziswa kabanzi futhi ihlinzeka ngemakethe ebanzi kakhulu yesikhunta sepulasitiki. Ngaphezu kwalokho, iqhutshwa ...
Kukhona isimiso esiyisisekelo ekukhetheni insimbi yesikhunta. A. Insimbi yesikhunta kufanele ihlangabezane nesimo sayo somsebenzi. 1. ukumelana ne-abrasive. Lapho ipulasitiki igeleza endaweni yokubunjwa, kuzoba nokungqubuzana okukhulu phakathi kwepulasitiki nendawo yomgodi, nokunye okwengeziwe...
Ngemibuzo ngemikhiqizo yethu, sicela ushiye i-imeyili yakho kithi futhi usithinte kungakapheli amahora angama-24.